एमाले-माके एकताः भएन अालोपालो, चार नम्बर बुँदा निकै घातक — OnlineDabali
एमाले-माके एकताः भएन अालोपालो, चार नम्बर बुँदा निकै घातक
Posted on February 19, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको छ । सोमबार मध्यरात बालुवाटारमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
विहान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्‍यक्ष केपी शर्मा ओली र माके अध्यक्ष प्रचण्डबीच गोप्य वार्ता भएको थियो । दुबै अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई साँझ एकता संयोजन समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
यसअघि नेतृत्वको अालोपालोबारे सात बुँदे सहमति पत्रको कुनै बुँदामा उल्लेख छैन । नेतृत्व अालोपालो अब नहुने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको लागि बुँदा नम्बर ४ निकै घातक सावित हुनेछ । त्यसमा एमालेले अपनाउँदै अाएको जबजले स्थापित गरेका मान्यतालाई उल्लेख गरिएको छ भने माओवादीले मान्दै अाएको माओवाद, जनयुद्ध र २१ औं शताब्दीको जनवाद दुबै उल्लेख छैन । यो बुँदाले नै प्रष्ट भएको छ की एमालेले माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेका राजनीतिक मूल्य र परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको छैन ।
सहमति पत्रमा जनयुद्ध भन्‍ने शब्द समेत उल्लेख छैन । यसले माकेको एमालेमा विलय भएको भन्न सकिन्छ । अब यही चार बुँदाको अाधारमा पार्टी अगाडि बढ्नेछ ।
यस्तो छ चार नम्बर बुँदा – नेकपा एमालेले अपनाउँदै आएको ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ अन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिष्पर्धामार्फत आफ्ना श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पनि उक्त शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिष्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्दै समाजवादको आधार निमार्ण गर्ने लगायतका मान्यतामा समान धारणा रहेको कुरा स्पष्ट भएकै छ ।
सहमति पत्रमा एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकले दुईओटा कार्यदल समेत गठन गरेको छ । विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न बनेका कार्यदलले छिटै काम थाल्ने बताइएको छ ।
एकीकृत पार्टी अाज निर्वाचन अायोगमा दर्ता गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
यस्ता छन् सात बुँदा
६. प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण मार्फत समाजवादका आधार निर्माण गरिने छ ।
७. आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपले सम्पन्न गरिने छ
अाज नेपाल बन्दः विहानैबाट गाडी चलेनन्, दुईओटा ट्रकमा अागजनी